प्रशंसापत्र | मेरो कार आयात
विश्वव्यापी वाहन आयातकर्ता आयात गर्नुहोस् पूर्ण IVA परीक्षण तपाईको कार युकेमा पूर्ण रूपले कम्प्यानेल हुन्छ 30 वर्ष बर्षको अनुभव जानकार, पेशेवर र कुशल 4000०००+ कार आयात गरियो सुपरकारबाट सुपरमिनी - हामी विशेषज्ञहरू हौं!
बेलायतमा एलएचडी कार आयात गर्ने र औपचारिकताहरू आफैंमा आफैंले व्यवहार गर्दा सजिलो लाग्न सक्छ जब सम्म मैले महसुस नगरेसम्म रातो टेपको मात्राले सजिलै यसलाई दुःस्वप्नमा बदल्न सक्छ। इन्टरनेटमा द्रुत खोजीले यस प्रकारको काममा विशेषज्ञता प्राप्त थुप्रै ब्रिटिश कम्पनीहरू ल्यायो। मैले जोडीलाई सम्पर्क गरेको जोडीले बेलायतको मापदण्डहरूको पालना गर्न आवश्यक पर्ने विभिन्न परिमार्जनहरू गर्नमा खर्चको एक अनुमान प्रदान गर्दैन, जोखिम म स्वीकार्न तयार छैन। भाग्यवस मैले मेरो कार आयात पाएँ र मैले तिनीहरूलाई सम्पर्क गरेको क्षणबाट नै मलाई थाहा भयो कि मैले सही व्यक्तिहरू भेट्टाएको छु। मेरो पहिलो कलको केही मिनेटमा मैले समावेश गर्न सक्ने सटीक लागतहरूको बारेमा विस्तृत अनुमान प्राप्त गरें, त्यसैले मैले अगाडि बढ्ने निर्णय गरें। जब मैले मेरो गाडी डर्बीको नजिकको क्यासल डोनिंग्टनमा उनीहरूको आधारमा पुर्‍याएँ तब मैले महसुस गरें कि मैले सही छनौट गरेको थिएँ किनकि त्यहाँ तीन फेरारी र एक रोल्स रोयस थिए, उनीहरूको टोयोटा आरएवी hy संकरको लागि पर्याप्त कम्पनी। सबै काम र औपचारिकताहरू मलाई बताइएको तीन हप्तामा समयमै सम्पन्न भयो, र लागतहरू अनुमानित अनुमानको रूपमा थिए। तर उचित लागत भन्दा बढी, के मलाई सबैभन्दा प्रभावित गर्नुभयो स्टाफको सहयोगीता र दक्षता।
धन्यवाद विल र तपाईंको उत्कृष्ट टीम!
पोर्श बक्सस्टर / VW Touareg / होंडा गोल्डविंग
मैले भर्खरै अन्डोराबाट बेलायतमा धेरै सवारी साधनहरू आयात गरेको छु।
इन्टर्नेटमा स्काउरि, गर्दा त्यहाँ धेरै तथाकथित विशेषज्ञ आयात एजेन्टहरू छन्, जसले प्रोसेसको प्रत्येक पक्षलाई डिलि can गर्न सक्दछन् भन्ने कुरामा गर्व गर्दछ, निर्यात प्रसंस्करण आयात प्रक्रियाको सबै पक्षहरूमा सही छ भन्ने कुराको सुनिश्चितताबाट: भ्याट, युकेमा परिमार्जन विशिष्टता, MOT, रेजिष्ट्रेसन, म्याट्रिक र अन्डोरा बाट बेलायतमा फ्रेटिंग। मेरा पहिलो दुई कलहरू आशावादी भए तर पछि, थप फोन कलहरू र अन्तहीन पीछा पछि, पूर्ण निराशामा समाप्त भए। भाग्यवस, मेरो तेस्रो प्रयासले मलाई मेरो कार इम्पोर्टको विल स्मिथसँग सम्पर्कमा राख्यो।
त्यसपछिका सबै चीजहरू सजिलो र 'प्लेन सेलि' 'थिए। उनीहरूले कुन जटिल प्रक्रिया हुन सक्छ भनेर प्रत्येक पक्षको ख्याल राखे - मेरो आफ्नै व्यक्तिगत अनुभवबाट, मलाई थाहा छ कि अन्डोर्रा / स्पेनिश सीमामा रहेको एक इंट्रासिजेन्ट कस्टम अफसर, वा कागजमा एउटा सानो गल्तीले, अराजकता निम्त्याउन सक्छ। यद्यपि मेरो कारको आयातको ध्यान विस्तारले सुनिश्चित गर्यो कि यस्तो अराजकता सम्भव थिएन।
प्रत्येक गाडीलाई केहि सानो परिमार्जनको आवश्यक पर्दछ, र एक वाहनले अचानक स्पष्ट ईन्जिन जटिलता विकास गरेको थियो। उनीहरूले ध्यान दिए र ती सबै मुद्दाहरूलाई सच्याए।
यो सबै मैले अनुमान गरेको भन्दा छिटो भयो र स्पष्टसँग, मैले आशा गरेभन्दा बढी आर्थिक हिसाबले। तिनीहरूले मलाई मेरो सुन्दर २०० sell होंडा गोल्डविंग बेच्न पनि मद्दत गरिरहेका छन्!
म तपाईंलाई हाम्रो कारको पञ्जीकरणमा सहयोगको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु - विशेष गरी क्याम्पर्भान, जसरी मैले अनुमान गरेझैं सजिलो छैन!
एक पटक फेरि धन्यबाद
तपाईको व्यवसायमा शुभकामना छ
केवल एक द्रुत नोट तपाइँलाई र टीमको सबै बाँकीलाई ठूलो धन्यवाद भन्न।
म कारको बारेमा चिन्तित छु, मलाई लाग्छ कि तपाईंलाई त्यो थाहा थियो !!
आज भन्नु पर्न कि यो IVA परीक्षण मार्फत थियो केवल राम्रो समाचार थियो।
फेरी धन्यबाद, तपाईले ठूलो काम गर्नु भएको छ र म तपाईहरु सबैलाई बोल्ने र हेर्ने आशा गर्दछु
म तपाईंलाई लेख्न चाहान्छु कि तपाईको र तपाईको टीमलाई MyCarImport मा तपाइँले हाम्रो लागि गरेको उत्कृष्ट कामको लागि। सिडनीबाट क्यासल डोनिंग्टनमा सम्पूर्ण सेवा पूर्ण समस्या भएको छ। हामी कसैलाई तपाईंको सेवाहरू सिफारिस गर्दछौं। धेरै धेरै धन्यवाद!
क्रिस र जेनी हर्सले
जगुआर ई प्रकार 3.8
कार आज बिहान मेरो घरमा आइपुगेको छ र शानदार देखिन्छ। एक महान क्षण।
म तपाईंलाई शिपिंग, यातायात, युके रेजिष्ट्रेसन इत्यादिको साथ सबैलाई मद्दत र सहयोगका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबै समस्याहरू बिना कुनै समस्याको साथ सहज रूपमा गयो र वास्तवमै एकदम चाँडो।
म खुशीसाथ तपाईलाई अरुलाई सिफारिस गर्दछु!
तपाइँ र तपाइँको सबै समूह को लागी धन्यवाद तपाइँले मेरो लागि के गर्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद म तपाईंलाई अधिक व्यापार गर्दछु, धेरै धन्यवाद।
श्रृंखला १ ल्याण्ड रोभर
२०१ G GT911 RS
मेरो २०१ P पोर्श GT2016RS आयात गर्ने पूर्ण प्रक्रियालाई ह्यान्डल गरियो, डेलिभरीबाट, कारलाई गति र दक्षताका साथ युके रेजिष्ट्रेसन मार्फत अनुरूप बनाउने। तिनीहरूले मलाई जानकारी गराए र बाटोको हरेक पाइला अपडेट गरे र म प्रभावित भन्दा बढी छु! मेरो विचारमा, यो एक मात्र कम्पनी हो जुन सवारी आयात गर्न व्यवस्था गर्न कल गर्दछ। यस्तो शानदार कामका लागि विल र टोलीलाई ठूलो धन्यवाद र म निकट भविष्यमा तपाईसँग फेरि व्यापार गर्दैछु।
पोर्श 718१XNUMX केम्यान यूएई लाई युके
मेरो 718१XNUMX केम्यानलाई सहयोग पुर्‍याउन सहयोगका लागि धन्यबाद, म तपाईंलाई उनीहरू साथीहरूलाई सिफारिस गर्दछु जसले उनीहरूको कारलाई युकेमा फिर्ता आयात गर्ने सोचमा छन्।
२०१ A अडी आरएस - - अष्ट्रेलिया देखि युके
फेरि मेरो कार अष्ट्रेलिया जेन्टबाट प्राप्त गर्नुभएकोमा धन्यबाद।
तपाईको सबै मेहनतको लागि पुन: धन्यबाद।
अडी RS3 अस्ट्रेलिया बेलायत
२०१ A अडी ए - - आयरल्याण्डको गणतन्त्र
म पुष्टि गर्छु कि सबै कागजहरू र प्लेटहरू आइसकेका छन्।
अब, यो वास्तवमै द्रुत रूपमा समाप्त भएपछि, म तपाईंलाई तपाईंको उत्कृष्ट, असाधारण सेवाको लागि मात्र धन्यवाद दिन सक्छु।
म टेक्स्ट ब्लक हुँ। यो पाठ परिवर्तन गर्न सम्पादन बटन क्लिक गर्नुहोस्।
लेक्सस IS एफ - साउदी अरेबिया
भर्खरै कार प्राप्त भयो, सबै राम्रो देखिन्छ। धन्यवाद अद्भुत सेवा को लागी फेरि धन्यवाद, तपाईले मेरो जीवन धेरै सजिलो बनाउनु भएको छ र तपाईको कम्पनीलाई अरुहरुलाई सिफारिस गर्नु हुनेछ।
अडी A3 - आयरल्यान्ड
केवल एक द्रुत सन्देश के भन्न को लागी एक उत्कृष्ट सेवा।
तपाईंले शाब्दिक रूपमा सबै राम्रोसँग ह्यान्डल गर्नुभयो। डीवीएलए आवश्यकताहरु हेरे पछि यो तपाईलाई हस्तान्तरण गर्न को लागी ठूलो राहत थियो र यसलाई यत्तिको कुशलतापूर्वक व्यवहार गर्नु भएको छ।
होन्डा ज्याज - न्यूजील्याण्ड
मैले भर्खरै तपाई र तपाईको स्टाफलाई धन्यवाद दिन चाहन्थें जुन कारलाई युकेमा ल्याउने मेरो लागि चुनौती भयो। मैले तपाईंको विज्ञापन इन्टरनेटमा देखें र प्रशंसापत्रहरू र प्रेस्टो पढें जुन तपाईंसँग कुरा गरेको केही दिन पछि, मेरो कार इम्पोर्टमा कुरा चलिरहेको थियो।
म कसैलाई पनि आग्रह गर्दछु कि उनीहरूको कार युकेमा पठाउँदा वास्तवमै विचार गर्नहोस् - पोर्टबाट लिनको लागि मेरो कार आयात भाँडामा लिन र युके सरकारको आवश्यकताहरू पूरा गर्न। उनीहरू उत्कृष्ट थिए।
मँ बुझ्छु कि मेरो गाडी तपाईंसँग काम गर्ने जस्तो लिगको समान लिगबाट टाढा छ, तर यो स्पष्ट थियो कि यसले उही समान ध्यान र ध्यान दिएको छ।
तपाईलाई धन्यवाद, तपाईका बुवा र जेड, मैले सम्पूर्ण प्रक्रियामा प्राप्त गरेको हेरचाह र ध्यानको लागि।
तपाईंको वेबसाइटको माध्यमबाट मेरो सोधपुछको पहिलो जवाफदेखि लिएर गाडीको डेलिभरी सम्म, म खुशी हुन सक्दिन र खुशीले तपाईंलाई फेरि प्रयोग गर्ने छु र तपाईंलाई साथीहरूलाई पनि दर्शाउँछु।
२०१ M मित्सुबिशी पाजेरो - दुबई देखि युके
२०१ K किआ पिकोन्टो - आयरल्याण्ड देखि युके
मेरो स्पीडोमिटर क्रमबद्ध गर्न र मेरो कार ल्याउनका लागि धेरै धेरै धन्यबाद। तपाईं जानु भएको सबै थप प्रयासको म साँच्चिकै कदर गर्दछु। उत्कृष्ट सेवाका लागि धन्यबाद!
सुजुकी ग्रान्ड भिटारा - NL to युके
प्लेटहरू आइपुगेका छन् र कारलाई अब कर बीमा गरिएको छ र कानूनी रूपमा। तपाईं र उत्कृष्ट सेवाको लागि कम्पनीलाई धन्यवाद।
टोयोटा एफजे क्रूजर - अष्ट्रेलिया
मेरो कारको आयातको ख्याल गर्नु भएकोमा धन्यवाद। मलाई थाहा छ यो विशेष गरी चुनौतीपूर्ण थियो, तर तपाईका सम्पर्कहरूका लागि धन्यवाद सही भागहरू प्राप्त गर्न सक्षम भयो र सबै मुद्दाहरू तुरुन्त र सन्तोषजनक रूपमा समाधान गर्न सक्षम हुनुभयो। म तपाईंको सेवाहरू सिफारिस गर्न हिचकिचाउँदिन।
२०१ V VW मल्टिभान -अस्ट्रेलिया देखि युके
धेरै धेरै मेरो लागि बाहिर क्रमबद्ध गर्न को लागी धेरै धेरै धन्यवाद, र यो कल्पना गर्न सक्दिन कि कत्ति गाह्रो हुने थियो यदि मैले आफैले सबै कुरा क्रमबद्ध गर्नु परेको भए। मेरो सबै बीमा क्रमबद्ध छ र सबै ठीक छ। धन्यबाद।
मेरो कार क्रमबद्ध गर्न को लागी धेरै धन्यबाद, प्लेट फिट, बीमा सेट अप र म फेरि सडकमा छु, धेरै खुशी। धन्यबाद, महान सेवा,
फोर्ड टुरिनियो - स्पेन
म केवल एक ठूलो काम को लागी धन्यवाद दिन चाहान्छु, म पनी तपाईलाई कुनै पनि साथीहरुलाई सिफारिस गर्दछु जसले भविष्यमा उनीहरूको कार लाई लिएर आउनेछन!
बेंटले - लेउस्डेन
धन्यवाद ज्याक, म तपाईको सबै सहयोग र सेवाबाट खुसी छु।
सिड्नी - ई प्रकार
खैर ई प्रकार घर छ, उनको बबलमा धेरै सय माईल गरेको र बाँचिरहेको गुडवुड फेस्टिवलमा रहन र VIP कार पार्कमा धेरै हलचलको कारण। उनको ज्यान नदिने ज्याकमा प्राप्त गर्नु भएकोमा धन्यवाद, म यसको धेरै मूल्यांकन गर्छु।
लस एन्जलस - होंडा CBR1000
महान सेवा प्रदान को लागी धन्यवाद।
एन्डोरा - एस्टन मार्टिन रपाइड र अडी S5
तपाईको सहयोगका लागि धेरै धेरै धन्यबाद, तपाईसँग व्यवहार गर्न पाउँदा खुशी लाग्यो।
र जेड र ज्याक दुबैलाई सबै चीजको लागि धन्यबाद! तपाईं प्रक्रिया भर महान हुनुहुन्छ र एक तनावपूर्ण प्रक्रिया एकदम सजिलो र लागत प्रभावी को रूपमा शुरू के बनाएको। तपाईका सेवाहरूको आवश्यक्ता भएको कोहीलाई पनि खुशीसाथ सिफारिश गर्दछ!
जस्टिन वान ईडेन
धन्यवाद भन्नलाई केवल द्रुत नोट। म सुरूमा केही चीज ल्याउने बारेमा चिन्तित थिए र अन्य शिपरहरू जुन मैले कुरा गरेको थिए सबै रहस्यमा समेटियो। मेरो प्रारम्भिक सम्पर्क बाट घर डेलिभरी मार्फत तपाईंले सजिलो बनाउनुभयो र राम्रो मूल्यको लागि सम्पूर्ण काम गर्नुभयो। मलाई बेलायतमा कारहरू लिन अझ धेरै समस्या भएको छ!
केवल एक लाइन तपाइँ सबै लाई धन्यबाद काम को लागी धन्यवाद दिन को लागी तपाइँले मेरो कार युके लाई आयात गर्नका लागि। म तिमी बिना यो गर्न सक्दिन। मेरो कृतज्ञता को कुनै सीमा छैन। मसँग तपाईंको दयालु धैर्य र बाटोमा तपाईंको सबै सहयोग सबैभन्दा बढी सराहना गरिएको छ। तपाईंको कम्पनी मेरो द्वारा अत्यधिक सिफारिश गरीनेछ मेरो कुनै पनि साथी र सहयोगीहरूलाई कार आयात सेवाहरू आवश्यक छ।
केवल आयातको साथ सबै मद्दत को लागी एक ठूलो धन्यवाद भन्न को लागी धेरै धेरै सराहना गरियो र म यो शब्द फैलाउछु।
तपाईको सबै कामका लागि धेरै धेरै धन्यवाद - यसलाई धेरै धेरै सराहना गरियो र तपाईले धेरै समस्याहरूको समाधान गर्नुभयो। म मेरो कार कानूनी यो देश मा ड्राइभ गर्न पाउँदा धेरै खुसी छु।
इटाली - होंडा मोटरबाइक
"फेरी धेरै उत्तम सेवाका लागि धन्यबाद दिइएको छ जुन धेरै तनावमुक्त प्रक्रिया भएको छ। मैले तपाईंको कम्पनीलाई अन्य केहि साथीहरूसँग पनि उल्लेख गरें जुन मेरो समान अवस्थामा छन् र उनीहरूले तपाईंको पंजीकरण प्लेटलाई रूपान्तरण गर्न तपाईंको सेवा लिन सक्छन्। ”
संयुक्त राज्य अमेरिका - KIA
"हामी मेरो कार आयात अत्यधिक पर्याप्त सिफारिस गर्न सक्दैनौं। मूल रूपमा, हामीले सोच्यौं कि किआ सेडोनालाई बेलायती सडकमा गाडी हाँक्नका लागि अनुकूलित गर्नु भनेको द्रुत कभर नोट प्राप्त गर्ने कुरा, हेडलाइटहरू समायोजन गर्ने र काउन्टरमा युके रेजिष्ट्रेसन प्राप्त गर्न कतारमा सामेल हुने कुरा हो। हामी कति गलत छौं, वास्तविक लडाई सवारी तथा अपरेटर सेवा एजेन्सी (VOSA) सँग थियो। स्थानीय किआ डीलरले सक्दो हेडलाइट प्रणाली (लगभग £ for०० को लागी) लाई प्रतिस्थापन गरेर आफ्नो सक्दो प्रयास गरे तर त्यसले एउटा तार ड्याling्लिंग छोडिदियो, जसलाई टेप गरे पनि अनुमति दिइएन। उनले हामीलाई अमेरिकी वायुसेना बेसको नजिक एउटा सानो ग्यारेजमा पठाए जुन उत्तर अमेरिकी कारहरू परिमार्जन गर्न प्रयोग गरिएको थियो, तर तिनीहरू भोसाको कठोरता र निरन्तर परिवर्तन भइरहेको नियमहरूका कारण हार मान्न बाध्य भए। उनीहरूले हामीलाई जैकतिर भने, मेरो कार आयातमा। दिनको दुई महिना पछि हामीले लिभरपुल डक्सबाट हाम्रो कार स collected्कलन गर्यौं, ज्याकले हाम्रो लागि तयार छ, युके-रेजिष्टर्ड, VOSA- अनुमोदित र इजाजतपत्र प्राप्त गर्‍यो। ज्याक चार्ल्सवर्थले हामीलाई दिने सेवा अमूल्य थियो। ”
रिभिड माइकल स्किलिरोहरू
ल्याण्ड रोवर फ्रील्यान्डर
“जेड विलियम्सन र मेरो कार आयातमा टोलीले मेरो ल्यान्ड्रोभरको आयातलाई निरपेक्ष व्यावसायिकता र दक्षताका साथ सम्हाले। म उनीहरूको अमूल्य सहयोग र सहयोगको लागि अत्यन्त आभारी छु किनकि उनीहरूले आयातको लामो प्रक्रिया पूर्णतया सहजै देखिन सफल भएका छन्। मैले चाहेको सबै भन्दा राम्रो आयातकर्ता र पैसाको लागि ठूलो मूल्य!
“हामी हालसालै बेल्जियमबाट बेलायतमा बस्न आएका थियौं। हामी बेलायतमा हाम्रो बेल्जियमको गाडी दर्ता गर्न चाहान्छौं, र हामी आफैं प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रयास गर्यौं। यद्यपि हामीले यति धेरै कठिनाइहरूको सामना गर्यौं जुन हामीले छोडेका थियौं। त्यसोभए हाम्रो तर्फबाट प्रक्रिया गर्नका लागि हामीले मेरो कार आयात भाँडामा लिने विचार राख्यौं। मेरो कार आयातले हामीलाई बेस्पोक उद्धरण बनायो र स्पष्ट पार्यो कि कुन कागजात प्रक्रियाको लागि आवश्यक थियो। कर्मचारीहरूले हाम्रा प्रश्नहरूको सँधै ईमेल वा फोनबाट मित्रैलो र छिटो जवाफ दिए। सम्पूर्ण प्रक्रिया हामीले अपेक्षा गरेको भन्दा द्रुत रूपमा सम्पन्न भयो: मेरो कार आयातलाई सम्पर्क गरेपछि दुई महिनापछि, हामी डीभीएलएबाट दर्ता कागजात प्राप्त गर्‍यौं। समग्रमा हामी मेरो कार आयातबाट प्राप्त गरेको सेवाबाट अत्यन्तै खुसी भयौं। ”
स्पेन - VW गोल्फ
“म तपाईलाई लेख्न र तपाईको संगठनले मेरो कारको आयातसँग गरेको व्यवहार कुशल तरीकाको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईंको कर्मचारी सहयोगी र मैत्री र हाम्रो विशेष आवश्यकताहरू पूरा गर्न पर्याप्त लचिलो थिए। तपाईको सहयोगका लागि धेरै धन्यवाद र तपाईलाई अरुको सेवा सिफारिस गर्नमा कुनै हिचकिचाउँदिन। "
स्पेन - अडी A8
"न्युजील्याण्डबाट डब्लुडी अडीलाई वोबर्न प्राप्त गर्नका लागि तपाईको सबै सहयोगका लागि धेरै ठूलो धन्यवाद दिन चाहन्छु, मेरा सबै प्रश्न, ईमेल र टेलिफोन कलहरू राख्नु भएकोमा पनि धन्यवाद!"
"म यो अवसर लिन चाहन्छु तपाईलाई र तपाईको टीमलाई मेरो दुई कारको आयातको सम्बन्धमा प्रदान गरिएको उच्च स्तरको सेवाको लागि। दक्षता, प्रभावकारिता र व्यावसायिकता एक मानकको थियो जुन आजकल विरलै अनुभव गरिन्छ। मैले पूर्वानुमान लिएको थिए कि सवारीहरू आयात गर्नु साँच्चिकै चुनौतीको हुनेछ - विशेष गरी डीभीएलसी वेबसाईट मार्फत! यसैले MCI द्वारा प्रदान गरिएको अन्त-अन्त सेवाले ठूलो राहत पायो र मैले अपेक्षा गरेको भन्दा बढी मैले अपेक्षा गरेको भन्दा बढी मूल्यवान ठान्छु। म अरूलाई एमसीआई सिफारिस गर्न हिचकिचाउँदिन। ”
जोन एस मिल
फिनल्याण्ड - टोयोटा
“फिनल्याण्डबाट मेरो ल्याण्ड क्रूजरको आयातमा तपाईंको अथक सहयोगको लागि म तपाईंलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले समस्याहरूको एक भूलभुलैयाको अपेक्षा गरेको थिए तर सम्पूर्ण प्रक्रिया तपाईको विशेषज्ञताको लागि हिचकिलो वा भारी बिल धन्यवाद बिना गयो। मैले पनी तपाईं मार्फत कारहरू खरीद र बिक्री गरें र सबै चीज एकदम व्यावसायिक तरीकाले व्यवहार गरिए पछि बिक्री पछि उत्कृष्ट। तपाइँ र टोलीलाई सिफारिस गर्न मसँग कुनै क्विम्स छैन र वास्तवमा म तपाईंसँग भविष्यको व्यापारको लागि तत्पर छु। "
लस एन्जलस - पोर्श 356 XNUMX
“कार आज १२: at० मा सुरक्षित रूपमा पुर्‍याइएको छ धन्यवाद। जोन र मारिया भय were्कर थिए! म पछिल्लो छ हप्ता को लागी स्लिप डिस्क संग पीडित छु त्यसैले मद्दत गर्न धेरै गर्न सकेन। तिनीहरूले सबै कुरा मिलाए। सबै चार पाels्ग्राहरुमा सपाट टायरहरू थिए त्यसैले उनीहरूले दयालुपूर्वक तीनवटा माथि पम्प गरे र मसँग पहिले नै भएको स्पेयर व्हीलको लागि चौथो परिवर्तन भयो। त्यसपछि तिनीहरूले कारलाई उतारे र मेरो लागि ग्यारेजमा राखे। सबै धेरै उपयोगी। उत्कृष्ट सेवाका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। "